Gaudí - Rwendo kuburikidza nemabasa ake makuru saCasa Batlló | Absolut Kufamba
Casa Batlló nemamwe mabasa makuru ehunyanzvi Gaudí aunogona kushanyira
Antoni Gaudí aive mumwe wevakagadziri vakuru uye mumiriri wepamusoro weSpanish mazuva ano. Saka nekudaro, akatisiira nhaka huru iyo iwe yaunogona kushanyira nhasi kuti uenderere mberi nekuyemura mabasa ake, izvo zvisingakusiye usina hanya izvo zvatinoziva. Imwe yacho ndiCasa Batlló asi ine mamwe akawanda atinofanira kunge tichiziva kana kuswedera padyo padyo nawo.
Nekudaro, isu takasarudza kuita a rwendo rwechokwadi kuburikidza nemamwe emamwe emifananidzo uye ekufungidzira mabasa ehunyanzvi. Ivo vese vane iwo ega ega, ekugadzira uye ekufunga ekupedzisa anovapa iwo akasarudzika mhedzisiro. Chinhu chakazvitaridza seyakajairika zvemazuva ano. Tichaenda kurongedza nekuti tiri kuenda parwendo!
1 Iyo Sagrada Familia naAntoni Gaudí
3 Guell paki
4 Vicens Imba
5 Iyo Capricho yeGaudí
6 Imba yeBooties
Iyo Sagrada Familia naAntoni Gaudí
Basilica iri muBarcelona ndeimwe yemabasa akashanyirwa, uye kuvakwa kwayo kwakatanga muna 1882, kuve imwe yemakereke akareba kupfuura mamwe ese pasi. Kunyangwe aine zvakawanda, isu tinogona kutaura kuti ndicho chihombe chake chikuru. Izvi zvakamutorera makore mazhinji ehupenyu hwake uyezve, nazvo, akasvika panguva yechisikigo, atove muchikamu chekupedzisira chebasa rake, kwaizove pfupiso huru yezvose zvataurwa pamusoro. Iyo hombe yetembere yakaitwa mune yakasikwa maitiro kunze kwechikamu checrypt yaive muNeo-Gothic. Maumbirwo ejometri haakwanise kushayikwa, kana kufanana nechunhu kungashaikwe. Kana usati washanyira iyo parizvino, haugone kupotsa musangano wechiratidzo nawo Antoni Gaudí!
Mune ino kesi, isu tiri kutaura nezvekugadziriswazve kwechivako, chiri paPaseo de Gracia muBarcelona. Tinogona kutaura kuti tiri munguva yechisikigo yaGaudí, kwaakagadzirisa maitiro ake ega uye kurudziro yake yakabva kune zvakasikwa. Ndataura izvozvo, kushanya kuCasa Batlló kunogona kuva imwe yenzvimbo dzakanakisa dzepfungwa dzako. Sei? Zvakanaka, nekuti kushanya kwacho kunogona kuve kwakabatana kwazvo nekuda kwehungwaru hwekugadzira, binaural kurira kana inofamba inofamba. Mune mamwe mazwi, nzira yekubatanidza munyika yaGaudí, yekuona izvo zvaakaona kana kunzwa zvaainzwa kuburikidza neye audiovisual show. Icho chiitiko chakasarudzika chinopindura mibvunzo yakadai sekufemerwa kwake, kuti fungidziro yehunyanzvi iyi yakasikwa sei nezvose zvakamukomberedza.
Pakushanya uku, iwe uchapindura kune izvi zvese uye nezvimwe. Sezvo iwe uchazowana inonyudza mukamuri umo iwe uchanakidzwa zvinopfuura chiuru skrini. Mavari iwe uchawana zvakavanzika zvaro zvese nezvekwakabva mu 'Gaudí Dome'. Asi kwete chete kuona kunokwana, asi akanakisa manzwi achakukomberedza nekutenda kune 21 maodhiyo chiteshi anotora mweya wechisikirwo uyezve, iwo mavolumetric fungidziro, uko mashiripiti achange ari kupfuura chaiwo.
Mushure mekunakidzwa nekutanga kwayo kana kwayakatangira, inguva yekupindawo mupfungwa dzaGaudí. Chinhu chinoratidzika kunge chakaomarara! Asi naGaudí Cube, zvichazadzikiswa. Imba nyowani iyo ine 6-mativi akatungamira cube. Nezvo iwe unozogona kushandura ese maonero echokwadi, zvinokutora iwe kuenda kune imwe nyika, kune fungidziro, asi kugara uchikubatsira iwe neese manzwiro, pasina kukanganwa kuti isu tiri mukati mepfungwa dzehungwaru. Ehezve, kune izvi, pakanga paine rakazara basa rekutsvaga shure kwaro. Sarudzo yemifananidzo yakaitwa, pamwe nezvinyorwa kana mapikicha uye zvimwe zvinhu izvo, nerubatsiro rwehungwaru hwekunyepera, zvakapa hupenyu kuchirongwa ichi.. Tichaona chokwadi nemaziso ake uye nemucherechedzo waakasiira pasirese.
Tiri kupinda riini mu Casa Batlló, tichanakidzwa nezvimwe kufungidzira kwehupenyu hwake, mifananidzo yekare uye iyi yese inzira yekufamba kuenda kunguva yake. Chimwe chinhu chitsva ndechekuti nekungosvika pendi, ma sensors akaiswa mukati mawo anotanga madiki mafirimu zvigadzirwa, nekudaro nekuwana rumwe ruzivo nezve imba uye nenharaunda yemhuri. Kupedza kunakidzwa nenhaka yake yese asi mumunhu wekutanga, ichiita chiitiko chemashiripiti chinofanirwa kuve chakararama, zvirinani, kamwe chete muhupenyu hwese. Iwe unotsunga kuti uone kushamisika kwayo?
PaGomo reCarmelo, kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweBarcelona, ​​tinowana Park Güell, iri rimwe remabasa anozivikanwa aGaudí. Kana isu tichimuona, isu tinoziva kuti iye zvakare anopinda mune yakasikwa nguva uye kuti iye anofarira chaiwo chaiwo maitiro. Mariri tinogona kuwana makona akakosha seSan Salvador de Horta tsime kana Joan Sales maonero, kubva kwaunogona kunakidzwa neepanoramic maonero eBarcelona. Atova chete pamusuwo kana mumatumba, isu tinogona kutonakidzwa nemhando yepamusoro yehunyanzvi. Imwe yenzvimbo dzinofanirwa kushanyirwa uye kana iwe watoita saizvozvo, kufamba-famba uchitenderera nzvimbo yacho hakumbokuvara.
Kunyangwe ese mapurani ezvivakwa aine kukosha kwawo uye kubudirira kumashure kwavo, mune iyi nyaya kana tichitaura nezvazvo Casa Vicens, isu tinofanirwa kutaura kuti raive rimwe remabasa ekutanga aakaita mushure mekudzidza zvivakwa. Saka pamwe, inowedzera yakatonyanya kukosha, kana zvichibvira. Nechikonzero ichi, tinogona kuzviisa munguva yekumabvazuva, sezvo iine mabhureki ekumabvazuva ayo Gaudí aifarira kwazvo mumakore ake ekutanga. Chivako chakaziviswa seAset of Cultural Interest uye gare gare, World Heritage Site muna 2005. Chinotisiya nemuvara wakakura pachikamu cheiyo facade, nekuda kwekupedzisa kwayo kwekeramic.
Iyo Capricho yeGaudí
Kunyangwe chiri chokwadi kuti mazhinji emabasa ake ari muCatalonia, mune iyi nyaya tinofanirwa kutaura nezvazvo 'whim' yakaenda kuComillas muCantabria. Inofanira zvakare kuvezwa munguva yekumabvazuva yeGaudí, uko maceramic matiles ari protagonist huru, kuwedzera kumaberere nezvidhinha. Sezvo iwe uchinyatso kuziva, ichi chivakwa chakashandurwa kuita miziyamu, sezvo hazvishamise. Kungonakidzwa nefaadade, ichakufadza!
Sezvo isu takavhura musuwo naEl Capricho, iye ari kunyatsotevera Imba yeBotines. Nekuti ndechimwe chezvivakwa zviri kunze kweCatalonia uye zvakanyanya muLeón. Yezvazvino mavambo, yaive imba yekuchengetera pamwe nekugara mumakore ayo ekutanga ehupenyu. Asi yatove muna 1969 yakaziviswa Historic Monument yeCultural Interest, ichidzoreredzwa muna 1996. Nhasi uno zvakare inogara miziyamu asi inochengetedza runako rwekare, kukosha kwaGaudí uye kuratidzwa kwehunyanzvi hwake. Ndeapi awakashanyira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Casa Batlló nemamwe mabasa makuru ehunyanzvi Gaudí aunogona kushanyira
Dzinonyanya kukosha mitauro yeIndia
Australia yesainzi uye tekinoroji zvigadzirwa